स्थानीय चुनाव अनिता भेटवाल
काठमाडौंमा बालेन साहकाे जितको अर्थ हो, जात र क्षेत्रभन्दा माथि उनको योजना र थरभन्दा व्यक्तित्वको छनोट भएको छ।
मधेशमा कसरी बलियो बन्यो एमाले?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्य प्रदेशमा खुम्चिएको वेला मधेशमा भने नेकपा (एमाले) बलियो बनेको छ।
‘निजगढ हवाईअड्डा’: अनुत्तरित प्रश्न
प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रश्नहरूको जवाफ विना जसरी हुन्छ ‘विकास देखाउने’ होड र हतारमा हवाईअड्डा बनाउन खोज्नु उचित होइन।
नेपालकै गरीब क्षेत्रको खाद्य सङ्कटलाई झन् गहिर्‍याउँदै छ जलवायु परिवर्तनले कुपोषण र बाल मृत्युदर उच्च रहेको पश्चिम नेपालको निर्वाहमुखी कृषिलाई जलवायु विपद्ले खलबल्याइरहेको छ।
घरजग्गाको सट्टेबाजीलाई नयाँ बजेटले लगाम लगाउला? समग्र अर्थतन्त्रलाई घातक असर छोडिरहेको घरजग्गाको सट्टेबाजीलाई लगाम लगाउने उपाय आगामी बजेटले अघि सार्ने अनुमान गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी नै चिन्दैनन् प्रसव फिस्टुला धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठान, काठमाडौंको मोडल हस्पिटल र सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पतालमा मात्र प्रसव फिस्टुलाको उपचार हुने भएपनि पहुँच नरहेका विरामी वर्षौंदेखि पीडा सहेरै बस्न बाध्य छन्।
पोखरामा मञ्जुलाई ‘पपुलर’ मत पोखरा महानगरमा उपमेयरकी उम्मेदवार मञ्जु गुरुङले ‘पपुलर’ मत पाइरहँदा एमालेभित्र भने अन्तर्घातको चर्चा भइरहेको छ।
स्थानीय सरकारको दोस्रो पाइला कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। साधन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रयोगकर्ताको बुद्धि-विवेकमा भर पर्छ।
‘मतगणना धेरै बाँकी छ, ठोकुवा गरेर जित मेरै हो भन्दिनँ’
‘मेरो हार होस् वा जित, समाजका लागि काम गर्न छोड्नेछैन। समाज, देश बनाउन कसैले केही न केही त गर्नैपर्छ।’
सरकारहरू अर्थ-राजनीतिका कमजोरी हटाउनु साटो अपारदर्शी तरीकाले मौद्रिक र वित्तीय व्यवस्थापनतिर लाग्दा श्रीलंका आज वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसेको छ।
‘अफ् कोर्स् बुद्ध वाज् बर्न इन नेपाल!’ भारतीय प्रधानमन्त्री आएर बुद्ध जन्मिएको देश नेपाल नै हो भनेर यस यथार्थलाई पुनःप्रमाणित गरिदेलान् भनेर पर्खिबस्नु परेन।
किन चुनावी अजेन्डा बन्नुपर्छ स्वास्थ्य बीमा? तत्काल सुधार नगरे नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल बन्ने खतरा देखिंदै छ।
जसरी गाउँ लगिंदै छ, त्यसरी नै काठमाडौं ल्याइदिन्छन् त? बालाजु बसपार्कमा भेटिएकी अप्सराले आफ्ना श्रीमान्‌ले भारतमा काम गर्ने सोच बनाएको बताउँछिन्। “भोट हाल्न त अब ठ्याक जुरे जस्तो हो। आधा पैसा हामीले र आधा गाउँबाट मिलाएका रहेछन्,” अप्सरा भन्छिन्, “घर पुग्न एक जनाकै २७ सय भाडा लाग्छ, एक जनाको भाडामा दुई जना जान पाउने भएपछि हिंडेका हौं।”
म त हिँडेँ गाउँको बसैमा... स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदाता शहरबाट गाउँ फर्किन थालेका छन्।
जंगबहादुरको मृत्यु स्वाभाविक कि हत्या? साक्खै मामाको हत्या गरेर सत्ताप्राप्तिको बाटोमा पदार्पण गरेका जंगबहादुरकै पनि आफ्नै भाइ, भारदार र दरबारिया षड्यन्त्रमा पटक पटक हत्या प्रयास भएको थियो।
‘साउन्ड’ संसारका किशोर कुन वेला रेकर्ड गरिएको आवाज कुन फिल्मका लागि आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले त साउन्ड इन्जिनीयर किशोर आचार्य भीडभाड होस् वा शान्त स्थान‚ जहाँ पनि रेकर्डर बोकेरै हिंड्छन्।
सावधान! भरतपुरमा चुनाव हुँदै छ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी भएकैले रेणु उम्मेदवार बन्न पाउनु हुँदैन भन्ने किमार्थ होइन, तर उनीभन्दा योग्य र योगदान भएका, शहीद परिवारका सदस्य तथा घाइतेहरू दाहालका सन्तान नभएकैले पटक पटक अवसरबाट वञ्चित हुनु चाहिं विडम्बना नै हो।
भरतपुरका उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलका ‘ब्याक बोन’ ८४ वर्षीय कृष्णलाल सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई दिएपछि आफू मेयरको उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता कृष्णलाल सापकोटा अहिले जगन्नाथ पौडेलको ‘ब्याक बोन’ बनेका छन्।